FITAKIANA : “Tsy tokony hitsabaka amin’ny fitakiana sendikaly ny mpanao politika”
Tato anatin’ny dimy volana nifanesy izay dia nanao sesilany ny fitakian’ireo mpiasa mivondrona ao anaty sendikaly. 13 septembre 2017
Maro amin’ireo hetsika no misy mampifangaro amin’ny fitakiana politika, nisy olon’ny fitondram-panjakana mihitsy aza no nivaky fa nisy tamin’ireo fitakiana no voalaza ho mamofompofona sy mifangaro ao anatina fitakiana politika. Manoloana izany indrindra dia hentitra ny mpitarika sendikaly ivondronan’ny mpiasa malagasy na ny Fisemare izay nilaza fa “tsy azo tsabahan’ireo mpanao politika ny tolona sendikaly”.
Hoentina hanamafisana izany dia manatanteraka atrikasa ireo mpikambana ao anatin’ny Fisemare nanomboka ny alatsinainy lasa teo. Anisany nivoitra tao anatin’izany ny fanasongadinana fa rafitra mahaleo tena natao hiarovana ny zon’ny mpiasa madiodio ny sendikaly ary tsy misy ifandraisany amin’ny raharaha politika velively.
Nambaran-dRasoamananoro Lalao, tompon’andraikitra ao anatin’ny Fisemare fa “manana ny maha izy azy tanteraka ny sendikan’ny mpiasa malagasy eto Madagasikara ary mahaleo tena ihany koa”. Amin’ny ankapobeny dia natao hijery manokana ny tombotsoan’ny mpiasa ny sendika ary hiaro ny zony ao anatin’ny asa ihany koa. Raha ny salan’isa voaray avy amin’ny fikambanan’ny sendikan’ny mpiasa malagasy anefa dia ambany dia ambany ny tahan’ireo mpiasa miditra ao anaty sendika izay tsy misy afatsy 7%n’ny mpiasa eto an-toerana mitotaly manodidina ny 50 isa eo ho eo.
Mbola olana ho an’ny mpiasa malagasy ny tsy fahafantarana ny fisian’ny sendika izay ahafahany misitraka ny zony. Araka ny vaovao voaray dia voalaza fa noho ny fanahiana hisian’ny teritery ao amin’ny toeram-piasana, ny hisian’ny tsindry hazo lena avy amin’ny mpampiasa, ny tahotra sy ny fampitahorana amin’ny tsy handraisan-karama no vato misakana ho an’ireo mpiasa tsy idirana ao anaty sendikaly.